Fambara sosialy, SEO, ary ny vokany eo amin'izy samy izy | Martech Zone
Fambara sosialy, SEO, ary ny vokany eo amin'izy samy izy
Alatsinainy, Aogositra 31, 2015 Alatsinainy, Aogositra 31, 2015 Douglas Karr
Matt Cutts dia nizara horonantsary iray izay niresahany ny fanamby mety hananan'ny injeniera raha toa ka namorona fiankinan-doha teo amin'ny algorithman Google sy ny famantarana sosialy izy ireo. Raha fintinina dia mampidi-doza loatra ny fananganana an'izany fiankinan-doha izany raha toa ny sehatra media sosialy hafa na manakana ny fikarohana na latsaka amin'ny lazany.
Tsy isalasalako fa izany no izy, fa ny tsaho maharitra satria ny matihanina amin'ny motera fikarohana dia matetika mahita fifandraisana misy eo amin'ny lohahevitra sosialy sy ny laharan'ny milina fikarohana. Araka ny naverin'i Matt dia tsy izany no antony. Nozarainay ny hevitray momba ny fiantraikan'ny media sosialy amin'ny SEO efa, fa andao hiresaka ny famantarana ara-tsosialy sy ny fomba ifandraisan'izy roa.
Mpankafy sy mpanisa mpanisa - Raha manam-pahefana matanjaka eo amin'ny sehatry ny indostria ianao, tsara ny fotoana mety nanoratana anao momba ny Internet. Angamba ianao niteny tamin'ny hetsika, nanao dinidinika, nanoratra bylines, na nisy olona nanondro ny asanao. Iray amin'ireo voalaza ireo, mazava ho azy, dia hitondra ny rohy roa mankany aminao. Mazava ho azy, io fanekena io dia mety hitarika fanarahana matanjaka amin'ny Internet raha mampiasa haino aman-jery sosialy ianao. Ny fanarahana ny fiaraha-monina dia mety amin'ny ankapobeny sandoka, mahatonga ireo fanisana ireo ho tsy azo ekena loatra amin'ny fidiran'ny laharana.
Fizarana ara-tsosialy - Ny haino aman-jery sosialy dia manome iray amin'ireo fomba mahomby sy mahomby indrindra amin'ny fizarana vaovao an-tserasera amin'ny tambajotra mifandraika. Mizarà fikarohana voalohany tsy mahazatra na atiny manintona ary tsy ho gaga ianao rehefa miparitaka toy ny afo mandoro ary mahatratra olona marobe. Ny fizarana haino aman-jery sosialy matetika no ahitako ny momba ny fitaovana na fandalinana vaovao, ka nahatonga ahy hanoratra momba azy ireo sy hamokatra backlinks. Na dia tsy miteraka filaharana aza ny habetsaky ny fizarana ara-tsosialy dia hifanaraka amin'ny laharana lehibe izany.
Satria tsy misy ny fifandraisana mivantana dia tsy midika hoe tsy misy fiantraikany. Raha mahita loharano na sehatra lehibe eo amin'ny fikarohana aho dia hizara izany amin'ny kaontiko media sosialy. Raha mahita fitaovana amin'ny haino aman-jery sosialy aho ary mizara izany amin'ny mpihaino ahy be dia be, mety hitarika lahatsoratra fanampiny sy backlinks hafa izay mitondra ny laharana. Ka na dia tsy misy fifandraisana mivantana aza dia misy ny antony tsy mivantana ananan'ny fantsona tsirairay amin'ny hafa.
Ny fampiasana ny fantsona roa dia hanatsara ny valin'ny iray hafa. Aza odian-tsy hita io fotoana io! Ireto misy torohevitra tsara Sprout Social ho an'ireo mpitantana haino aman-jery sosialy hifanaraka amin'ny paikadin'ny fanatsarana ny motera fikarohana.
Mitombo ny fifampizarana haino aman-jery sosialy
Parse.ly vao haingana no namoaka tatitra fa Nandresy an'i Google izao ny Facebook amin'ny maha-referrer ambony an'ireo mpanonta. Ity fihenan-danja ity dia zava-dehibe ho an'ny mpitory ao an-tsaina. Raha mandrotsaka ny ezaka rehetra ataonao amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana ary ny fahafaha manao backlink fa tsy mamorona paikady media sosialy lehibe dia mihena ny fotoana hahatratrarana mpihaino vaovao.
Tags: fikarohana OptimizationSEOfambara media sosialyTetikasan'ny media sosialypaikady fizarana sosialyfamantarana ara-tsosialypaikady sosialy
LeadSift: Haka ny fomba fijery voadinika sy azo ampiharina amin'ny haino aman-jery sosialy
Traikefa amin'ny finday sy ny vokany eo amin'ny fironana